Indlela ukufihla IP
umbuzo uwukuthi kanjani ukufihla ikheli lakho le-IP, lapho abasebenzisi ngenxa yezizathu ezihlukahlukene:lapha, futhi isifiso ukuvakashela amawebhusayithi ngokungaziwa, ngaphandle ukwembula ulwazi mayelana ukuphi, nokuphishekela ukwandisa ezingeni ukuphepha Internet. Ukucasha ip - inqubo elula, ukuze kuthi, uma kunesidingo ke zingase zikhalele ubani
Uma uvakashela isayithi, isiphequluli asithumela iseva ulwazi mayelana IP-ikheli lakho, ngalo ungakwazi ukunquma indawo eseduze umsebenzisi kanye nenombolo ye neminye imininingwane ebalulekile. Ukuze ugweme lokho kudalula, udinga ukwenza Uxhumano kwiseva akuyona kusuka kwikhompyutha yakho, futhi ngokusebenzisa ezinye umlomo nomlomo.
Kukhona izindlela eziningana ekushintsheni real IP-amakheli on the outlier, engenalo nelincane maqondana indawo yakho. Ngezansi sibheka izindlela main kungase kutholakale practice. Uma une ezinye izinketho - ukuyifunda kanye nezinye abasebenzisi kule imibono
Hawu, uma ufuna ukulanda ifayela Depositfiles free, kodwa uhlelo lithi ebhuthini olandelayo izotholakala kuphela emashumini ambalwa imizuzu, usike uxhumano kwi-inthanethi bese uxhuma kabusha.
Uma Awukaxhumi a static IP-ikheli, by ukuxhuma kabusha kwi-Inthanethi, ungakwazi kabusha ukulanda ifayela kusuka Depositfiles ngaphandle kwezikhathi ezimi kokulinda.
Kukhona izinhlelo eziningi ezinikeza abasebenzisi ukufihla ikheli le-computer. Inkinga wukuthi iningi labo uzimisele Antivirus njengosongo olukhulu security, ngakho lapho yokulanda lesi sicelo, ungakwazi pick up a okukhulu "esithathelwanayo."
Fihla Njengoba isicelo omethembayo kungaba baziswe IP Easy, esiza ngempela ukushintsha ip. Indlela okusebenza:
Vula main isicelo iwindi. Ngesikhathi phezulu uzobona real IP-ikheli lakho.
Chofoza "Gijima Fihla IP".
Qala kabusha isiphequluli sakho uma uvuliwe.
lakho le-IP-ikheli zizoshintsha nomaphi - value entsha kuboniswa phezulu efasiteleni wasayina njengoba "IP Fake"
As an iseva elibambayo umlamuli ingaba phakathi kwekhompyutha kuwebhusayithi. Isimiso okulandelayo:
Uthumela isicelo sokuba kuvulwa isayithi ngokusebenzisa seseva.
I-server uthumela isicelo sakho isayithi ezifanele.
Uzothola impendulo evela iseva site wayefisa.
Direct usebenzisana seseva, ngakho abanikazi site IP yakho ngeke akwazi ukugcina ithrekhi.
Uma ISP yakho likwazi ukufinyelela izinsiza ezithile, abese esebenzisa i-proxy, ungathola azungeze Lo myalo futhi ukuya kuwebhusayithi ivinjiwe.
Udinga ukuthola on the Internet proxy amakheli bese ufaka nabo izilungiselelo uxhumano lwakho. Ake sibone indlela esingakwenza ngayo lokhu ku isibonelo se-Google Chrome:
Thola ikheli ngokusebenzisa yimuphi injini yokusesha (amaseva njalo beshintsha, ngakho thina ngeke ucacise kubo).
Yiya izilungiselelo Chrome. Chofoza isixhumanisi ezansi le "Bonisa izilungiselelo eziphambili".
In the "Network" section, chofoza "Shintsha izilungiselelo proxy".
A iwindi lizovela "Properties Inthanethi". Uma usebenzisa uxhumano-broadband, bese ukhetha it bese uchofoze inkinobho "Izilungiselelo". Uma une inethiwekhi yendawo, futhi wena usebenzisa uxhumano wireless, bese cindezela. "Network Ukucushwa"
Futhi eqinisweni, futhi kwesinye isigameko ngendlela efanayo lizovuleka izilungiselelo, lapho udinga uphawu "Sebenzisa iseva proxy", bese ufaka ikheli kanye port zitholakala.
I ethile esemqoka yalolu ndlela - engazinzile rabotahttp proxy. Lokhu ikakhulukazi kusebenza amakheli khulula; kodwa uma uzimisele ukukhokha imali, kungcono ukuphuma i surfing engaziwa akuyona proxy, futhi i-VPN ivuswe imigudu, okuyinto sixoxa ngezansi.
Eqinisweni anonymizer bamele proxy iseva efanayo, kuphela esenziwe ngesimo website. Online ungathola kuzo eziningi, kodwa zonke usebenza isimiso esifanayo, evula ukufinyelela wayefisa ikhasi lewebhu ngokusebenzisa amasevisi ayo.
Yiya ku anonymouse.org website bese ufaka i-URL yekhasi ofuna ukubona engaziwa. Emva ngokucindezela inkinobho "Surf ngokungaziwa", uzobe uqondiswe resource eshiwo, kuleli cala ikheli lakho izobe spoofed.
Ukuze ubone ukuthi usebenza, okokuqala kudingeka wazi ikheli le-computer.
Sebenzisa 2ip.ru yenkonzo futhi ngibone ukuthi yiluphi ulwazi ngawe ibonakala ngaphandle anonymizer.
Khona ukuvula anonymouse.org site futhi uthayiphe ikheli bar 2ip.ru. Bukani yi - zizoshintsha ngokuphelele lonke ulwazi kusuka ikheli kusiphequluli
Ngokufanayo, inkonzo usebenza HideMe.ru. Wena ubuye faka ikheli website bese uchofoza inkinobho "HIDEME". Lapha esakhiweni babe nethuba isengezo senethiwekhi ezimele (VPN).
i-VPN ivuswe imigudu
I ephephe kunazo oqine indlela - ukuxhuma VPN. Uzothola ukulondeka engaziwa nje kuphela, kodwa futhi anda on the Internet, njengoba zonke izimoto izodluliselwa phezu umzila ephephile.
I ethile main usebenzisa isengezo senethiwekhi ezimele - akunakwenzeka ukuthola isisombululo free. Isevisi efanayo inikeza ngamasevisi eziningi, ngakho ungakwazi ukhethe eshibhile, kodwa musa akhokhe ngeke zisebenze.
kanjani ukunikeza Internet mobile on smartphone yakho Wi-Fi? Misa i yokungena (Wi-Fi router) ocingweni Android OS
netbook My ayisekeli WiFi
Shintsha lwemibhalo lapho amaphrofayli komsebenzisi | Encyclopedia of Windows
Musa uvule Blok uhlelo